रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको कल डिटेलमा यस्तो देखियो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको कल डिटेलमा यस्तो देखियो !
रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको कल डिटेलमा यस्तो देखियो !
काठमाडौं : शालिकराम पुडासैनीको आ*त्मह*त्या प्रकरणमा हि*रासतमा रहेका रबि लामिछानेको नम्बरबाट रुक भनिने अस्मिता कार्कीलाई सम्पर्क नगरिएको पाइएको छ। यदपि ‘सिधा कुरा जनतासँग’को प्रसारण संस्था न्युज २४को ल्याण्ड लाइन नम्बरबाट भने अस्मिता कार्कीको मोबाइलमा पटक–पटक स*म्पर्क भएको देखिएको छ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्म ह*त्या प्रकरणको छा*नबिन गरिरहेको प्रहरीले रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको कल डिटेल निकालेर विश्लेषण गरेको छ । प्रहरीले दोस्रो पटक लिएको पाँच दिनको अ*नुसन्धान म्या*द आइतबार सकिँदैछ। अ*नुसन्धान अधिकारीहरुले सोही दिन मु*द्दा अदालतमा बुझाउने तयारी गरिरहेको जनाएका छन्।
रविको विषयमा देशभर घ*टनाक्रम बढेपछि प्रहरीलाई चाँडो मु*द्दा बुझाउन द*वाब परेको छ । प्रहरीले आ*रोपीको बयान, महत्वपूर्ण कल डिटेल, डिजिटल फ*रेन्सिक ल्याब (डिएफएल) को प्रतिवेदन र पो*ष्टम*र्टम रिपोर्टलाई प्रमाण बनाउँदै मु*द्दाको तयारी गरे को हो।२०७६ भदौ १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा आएको मुलुकी अ*पराध संहिता अनुसार आत्मह*त्या गर्न दु*रुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि क*सुरदार ठहरिन्छ। यही कानुनका आधारमा प्रहरीले रवि लामिछाने, युवराज कँडेल तथा अस्मिता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई अ*नु सन्धान गरिरहेको छ।
जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि नेतृत्व नछाड्न ओलीलाई सुझाब
कोरोनाबाट ९८ वर्षीय वृद्धको निधन, छोरा-बुहारीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण